Warbixin: Maxaa ka jira in la fududeeyey weerarkii Elite? – Benaadirtv.com
Warbixin: Maxaa ka jira in la fududeeyey weerarkii Elite?
Hotel Elite, Muqdisho
Muqdisho – Waxaa weli isa soo taraya macluumaadka laga helayo weerarkii xooganaa ee maalin ka hor lagu qaaday hotelka Elite ee magaalada Muqdisho, kaas oo ay fuliyeen dagaalyahano ka tirsan Al-Shabaab oo gudaha u galay hotelkaasi.
Janaraal Yuusuf Maxamed Siyaad (Indha Cadde) oo xilal kala duwan ka soo qabtay dalka ayaa sheegay in la fudueeyey weerarkaasi, kadib wareysi uu siiyey Shabelle.
Indha Cadde ayaa wareysiga lala yeeshay ku sheegay in gaarigii uu ku qarxay afaafka hore ee hotelka iyo raggii saarnaa loo fudeeyey inay tegaan hotelka oo si weyn loo ilaaliyo.
Sidoo kale wuxuu tilmaamay in goobta la weeray ay ku yaallaan Koontaroolo dhowr ah oo lagu baaro gaadiidka kala duwan, xittaa kuwa dowladda, isaga oo carabka ku adkeeyey in su fudud aan lagu geli karin halkaasi, islamarkaana ay cadahay in lala shaqeeyey raggaasi.
”Waa loo fududeeyey in gaarigaas uu meesha tego waa lala shaqeeyey si kale oo ku dhici karto maleh, aniga baabuur Cabdi Bile ah oo Nashiike saaran yahay ayaan la socdaa baabuurkeyga ciidan ayaan saaran waa la’ii celiyaa, waana la’iibaaraa ID Card ayaa la’ii weydiiyaa, marka si kale kuma tegi karo gaarigaas in loo fududeeyey uun ayuu ku tegay hotelkaas.’’ ayuu yiri Janaraal Yuusuf Maxamed Siyaad (Indha Cadde).
Waxa kale oo uu ka hadlay waxaa soo celiyey weerarada Al-Shabaab ee magaalada Muqdisho,isaga oo sabab uga dhigay in laga gaabiyey culeyskii saarnaa,gaar ahaan dagaalka lagula jiro iyo sidoo kale isla xisaabtan la’aan ka jirta hay’adaha amniga.
Ugu dambey wuxuu hoosta ka xariiqay in Al-Shabaab ay awoodaan inay weeraraan goob kasto oo bartilmaameedkooda ah, iyaga oo adeegsanayo wejiyo kala duwan iyo xeelado.
Si kastaba ha’aahaatee hadalkan ayaa ku soo beegmaya maalin, kadib weerarkii cuslaa ee lagu ekeeyey hotelka Elite, kaas oo ay ku dhinteen ku dhowaad 20 qof, halka ay ku dhaawacmeen tiro intaasi ka badan oo isugu jiray shacab iyo shaqaale dowladeed intaba.
18th Aug 2020 Editor
Previous Previous post: Jubbaland oo Beesha Caalamka ugu baaqday qabsoomida Shirka Dhuusamareeb 3 oo loo dhan yahay (Akhriso)
Next Next post: Hadalkii Qoor-qoor maxaa loo fasiran karaa?